Mmekọrịta mmekọrịta, data ndị ahịa ị kwesịrị ịdebe
Fraịdee, Nọvemba 6, 2015 Saturday, January 14, 2017 Muhammad Yasin
Ọ bụ ezie na anyị niile nwere ike, maka ọtụtụ akụkụ, kwenyere na ọdịnaya mmekọrịta abụghị ihe ọ bụla "ọhụụ," ọganiru na teknụzụ azụmaahịa emeela ka ọdịnaya mmekọrịta na-abawanye uru maka mbọ ahịa mmadụ. Ọtụtụ ụdị nke ọdịnaya mmekọrịta nye ụdị ohere ịnakọta ọtụtụ ozi banyere ndị na - eri ihe - ozi enwere ike iji ya mee ihe maka mkpa ndị ahịa yana nyere aka na mbọ ịre ahịa n'ọdịnihu. Otu ihe ọtụtụ ndị ahịa na - agba mgba, agbanyeghị, na - achọpụta ụdị ozi ha chọrọ ịnakọta yana ọdịnaya mmekọrịta ha. Na njedebe, ọ bụ okwu ịza ajụjụ ọla edo a: "Kedu data ahịa ndị ahịa ga-akacha baa uru maka ebumnuche nzukọ a?" Ndị a bụ ụfọdụ aro maka data ndị na-azụ ahịa dị ezigbo mma ịmalite nsuso n'oge nkwalite ọdịnaya mmekọrịta gị na-esote:
Nakọta e-mail na nọmba ekwentị nwere ike iyi ihe doro anya, mana ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ndị anaghị eme nke a. E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche ebe ahụ na -emepụta ọdịnaya mmekọrịta kpakpando naanị maka ebumnuche nke ika; ya mere nchịkọta data na-ejedebe na-azacha n'okpuru akwa.
Ma ọ bụ egwuregwu ma ọ bụ ngwa mmegharị ahụ ọchị, akara gị ka nwere ike irite uru site na ịnakọta ozi ahụ. N'okpuru ala, akara gị nwere ike ibute nnukwu nkwalite na ịchọrọ ka ndị na-akwado gị (dị ka ndị metụtara ngwa gị) ịmara banyere ya. Ma ọ bụghị naanị na ịchọrọ ka ha mata maka ya, mana ịchọrọ ka ha jiri nkwalite ahụ mgbe ha zụrụ ihe n'ụlọ ahịa gị.
Ugbu a, m na-kpam kpam na-na e nwere mgbe ụfọdụ ọ na-adịghị "eme ka uche" na-arịọ maka ozi kọntaktị. Enwetara m ya. Tupu (ma ọ bụ ọbụlagodi) igwu egwuregwu, ọ dịghị onye chọrọ ịkọ ozi ha. Agbanyeghị na ịmara na ị ga-eji ozi kọntaktị ndị ahịa na-eme ihe n'ụzọ dị mma, n'ụzọ iwu, n'ụzọ nkwanye ùgwù, a ka nwere ọtụtụ ndị na-atụ egwu na ị gaghị. Ọ dabara, enwere otu ihe ị ga - eme nke ahụ na-enyere ọtụtụ ụdị aka m ji rụọ ọrụ - nke ahụ na - enyekwa ụfọdụ ụdị mkpali na nzaghachi maka ozi kọntaktị bụ isi. E kwuwerị, olee otu ha ga-esi gbapụta onyinye ha ma ọ bụ ihe nrite ha ma ọ bụrụ na anyị amaghị ndị ha bụ?
Mkpalite nwere ike ịdị ka ihe ukwu ma ọ bụ pere mpe dịka akara gị chere na ọ dabara. Mgbe ị gụsịrị egwuregwu ma ọ bụ nyocha nyocha dị mkpirikpi (ihe ọ bụla mmekọrịta gị na ya mejupụtara, n'ezie), ị nwere ike ịjụ ma ọ bụrụ na ha ga-ahọrọ ịbanye maka ohere iji nweta nnukwu onyinye ma ọ bụ họrọ ịbanye na coupon ma ọ bụ onyinye . Dị ka o kwesịrị ịdị, isi ihe a niile bụ na ndị mmadụ nwere mmasị na ihe efu (ma ọ bụ nwee ohere iji nweta ihe efu). Ndị na-azụ ahịa ga-enwekwu ọchịchọ ịnye ozi ha ka e wee kpọtụrụ ha gbasara ihe na-agba ha ume.
Ọpụrụiche na nchịkọta Google, nsuso mmemme bụ nsuso nke mmemme na ihe mmekọrịta mmekọrịta nke weebụsaịtị gị. Ihe omume ndị a (ma ọ bụ "ihe omume") nwere ike ịnwe ụdị mmekọrịta ọ bụla - ihe niile site na ịpị bọtịnụ egwu / nkwụsịtụ na vidiyo, ịhapụ ụdị, ịnyefe ụdị, ime ka egwuregwu dị ọhụrụ, ibudata faịlụ, wdg. . Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmekọrịta ọ bụla na mgbasa ozi mmekọrịta gị na ika dịka “ihe omume.”
Ihe na-eme ka nsuso ihe omume na-enye aka bụ na ọ na-enye nghọta dị ukwuu banyere otu ndị ahịa gị si etinye weebụsaịtị gị yana ka ha nwere mmasị na ọdịnaya gị. Ọ bụrụ na nsuso ihe omume na-ekpughe na ndị mmadụ na-akụ bọtịnụ egwuregwu na egwuregwu otu oge, ọ nwere ike ịbụ ihe na-egosi na egwuregwu ahụ na-agwụ ike ma ọ bụ na ọ bụghị ihe ịma aka zuru ezu. N'akụkụ tụgharịa, ọtụtụ omume "egwu" nwere ike igosi na ndị mmadụ na-atọ ụtọ egwuregwu ahụ dị na saịtị gị. N'otu aka ahụ, ahụghị ihe "nbudata" zuru ezu / omume / omume nwere ike ịbụ ezigbo ihe ngosi na ọdịnaya a na-ebudata (e-ndu, vidiyo, wdg) abụghị ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụ bara uru iji budata. Mgbe ụdị nwere ụdị data a, ha nwere ike ịme ọfụma na ọdịnaya ha yana atụmatụ ahịa ha niile.
Ijikọta nsuso ihe omume na weebụsaịtị gị nwere ike ịbụ ntakịrị aghụghọ, mana ekele, enwere ọtụtụ ụzọ esi eduzi ndị mmadụ ebe ahụ (gụnyere otu na Google) nwere ike inyere gị aka mejuputa ihe omume GA mara mfe. Enwekwara otutu ndu di nma banyere uzo esi aguta ma guo mkpesa site na GA na ihe ndi ichoro.
Azịza Nhọrọ Ọtụtụ
Typedị ikpeazụ nke ozi ndị na-azụ ahịa nke m na-akwado nsuso bụ ọtụtụ azịza azịza nke ajụjụ, nyocha na ndị nyocha. O doro anya na, ọtụtụ nhọrọ nhọrọ (na azịza) ga-adịgasị iche iche, mana enwere ụzọ 2 ịchọọ azịza ọtụtụ nhọrọ nwere ike inyere gị aka! Maka otu, dị ka nsuso mmemme, ọtụtụ ajụjụ na azịza ga-enye akara gị echiche ka mma banyere ihe ọtụtụ ndị ahịa chọrọ ma ọ bụ tụọ anya n'aka gị. Site na ịnye ndị na - eri gị nhọrọ ole na ole ịhọrọ site na (n'ime ajụjụ nyocha ma ọ bụ nyocha gị), ọ na - enye gị ohere ịkekọrịta nzaghachi ọ bụla na pasent; nke mere na ị nwere ike ijikọ ụfọdụ ndị na-azụ ahịa site na nzaghachi ha. Dị ka ihe atụ: Ọ bụrụ na ị jụọ ajụjụ ahụ, “olee nke ọ bụla n’ime àgwà ndị a ma ọ bụrụ na ọ kachasị gị mma?” ma ị nye azịza 4 nwere ike (Red, Blue, Green, Yellow), ị nwere ike ikpebi ụdị agba kachasị ewu ewu site na mmadụ ole ahọrọ ahịrị ụfọdụ. A gaghị enwe ike ịme nke a site na nzaghachi.
Ihe ọzọ mere ịchọọ ọtụtụ azịza nwere ike ịba uru bụ na ụdị nwere ike ịbawanye n'ihu na ndị ọrụ akọwapụtara nke nyere ụfọdụ nzaghachi (Ọpụ: na-adọpụta ndepụta ndị ọrụ zaghachiri agba ha kachasị amasị "uhie"). Ọ na-enye ndị ụdị ohere ilekwasị anya na ahịa ahịa ha na ndị ọrụ akọwapụtara na ụdị ahụ - ma ọ bụ site na e-mail ahịa, ozi ozugbo ma ọ bụ oku ekwentị. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịchọpụta na ndị na-azụ ahịa nke zara otu ihe nwere ụfọdụ ihe ndị ha kwesịrị ịnakwere. Greatfọdụ nnukwu multiple-nhọrọ ajụjụ i nwere ike ịjụ na-echekarị banyere: zuo oge, chọrọ ika, ugbu a ika - ihe ọ bụla nke ga-enyere ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu mkparịta ụka, n'ezie!
N'agbanyeghi ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke ọdịnaya mmekọrịta gị bụ, ịnakọta data n'akụkụ ọ bụla nke mmekọrịta onye na-ere ahịa bara uru. Site na ndi mgba ohuru na agbaputa ubochi obula, i ji ya udiri ika gi mara ndi ahia gi na ihe ha choro. Ọganihu na teknụzụ emebeghị ka ọ kwe omume ịchịkọta data a, mana emeela ka ọ dị mfe ịme ya. Site na akụrụngwa niile dị maka ndị ahịa, enweghị ihe ngọpụ ka ị ghara isochi ihe niile!